Ireo marikain'olombelona - Ny Martsa Manerantany
Home » Olona an'ohatra
Avy amin'ny IES Punta Larga an'i Santa Cruz de Tenerife dia nandefa anay ry zareo
Sarin'ny faha-2 amin'ny tsingerin'ny fampianarana momba ny fanatanjahantena Socio, fanatanjahantena ATL
Izahay dia mandefa anao horonantsary ny famantarana ny tsy fanoloran-tena maha-olona izay nataon'ny mpianatra sy ny mpampianatra ny ivony tamin'ny volana septambra 26.
Mpianatra avy ao amin'ny Institera El Casar
Mpianatra ny IES Campiña Alta sy ny IES Juán García Valdemora
<blockquote> Mandritra ny Andro iraisam-pirenena tsy fanarahan-dalàna sy fanombohana ny 2 World martsa dia nanao mpianatra ny 200 ny IES Campiña Alta sy ny IES Juán García Valdemora, ary ny 50 olon-dehibe ao El Casar dia nanao marika maha-olombelona ny tsy fanarahan-dalàna. </ blockquote >
IES MiraCamp, Vila-tena
Ao amin'ny MiraCamp IES dia nilaza amintsika izy ireo fa:
<blockquote> Nohazavainay mikasika ny lohahevitr'ilay fampielezankevitra nataonao, "Ny mariky ny fiadanan'olombelona sy fandriampahalemana".
Raisinay ho mahaliana tokoa ny tolo-kevitrao izay antony amoahanay aminao ny asanay amin'ny mpianatra. </blockquote>
Avy any amin'ny IES Antonio Machado alefaso ity vondrona sarin'ny fomba namolavola ny tandindon'ny fiadanan'olombelona ity.
Avy amin'ny Sekoly ambony any Rosales ao Madrid, izy ireo no mandefa an'io mariky ny fandriam-pahalemana maha-olombelona antsika.
Sarin'olombelona sy lambam-pihavanana
Ny hetsika "FAHASALAMANA SY SABANA DE LA PAZ" dia notanterahina niaraka tamin'ny mpianatra ambaratonga ambony sy ny sekoly voalohany tao amin'ny sekoly "Villa Maria Cano" tao amin'ny tanànan'i Mosquera Cundinamarca (Colombia).
Manatontosa hetsika momba ny fialam-boly mampiakatra saina ny vahoaka momba ny olan'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana ary fampandrenesana ny 2 World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandriampahalemana.
Institut amin'ny fampianarana any Tamil Nadu
Institut amin'ny fampianarana any Tamil Nadu (India)
30 tamin'ny volana aogositra 2019, mariky ny fandriam-pahalemana no nahatanteraka tao amin'ny Institution'ny fampianarana any Tamil Nadu (India).
Avy amin'ny sekoly Diana Diana - Madrid
Tamin'ny andron'ny Peace and Non-Violence 2019, nametraka ny marika nataonay tamin'ny Janoary 30 aho teo afovoanay.
Avy amin'ny CEIP Cardenal Herrera Oria avy any Madrid, tamin'ny andron'ny fandriampahalemana sy tsy herisetra 2019, dia nampita ity hafatra mahafinaritra ity izy ireo
Voalohany indrindra, misaotra anao amin'ity asa mahafinaritra ity.
Omaly no nankalazantsika ny Andron'ny fandriampahalemana tany am-pianarana. Ny ambaratonga tsirairay dia nanao rojo loko miloko iray misy hafatra milamina sy fitiavana. Tao an-tokotanina dia nifamatotra daholo ny gadra ary namorona faribolana izahay niaraka tamin'ny teny filamatra hoe "Matanjaka kokoa isika".
Naverina ny hafatra momba ny fandriam-pahalemana, manohitra ny herisetra isan-karazany ary nihira hira izahay.
Maniraka anareo sary miaraka amina fitiavana ny sekoly izay tianay hianjady eran'izao tontolo izao isika.
Raha tsy misy olon-kafa manokana, dia miarahaba amim-pitiavana.
Mianara bebe kokoa